Shiinaha SPC Dabaqa SM-056 Soo-saar iyo Warshad | Dheeraad ah
Xullo dabaqa, u fiirso shanta qodob ee muhiimka ah 1, fiiri alaabta ceeriin ee dabaqa. Guud ahaan, waxaa jira sagxad adag oo alwaax ah, sagxad adag oo alwaax ah iyo gogol la xoojiyay. Xulashada sagxadda dhulka waxay kuxirantahay waxa ay yihiin alaabta ceyriinka ah, nooca alwaaxda iyo xabagta super loo isticmaalo.
2. Fiiri shahaadada dabaqa ah iyo shahaadada wax soo saarka ilaalinta deegaanka. Xusuusnow inaad aragto shahaadada dabaqa, dabaqa waa inuu ugu yaraan gaadhaa heerka heerka E1 ee qaranka, iskuday inaad ka doorato ka wanaagsan heerka heerka alaabta heerka E0, ama shahaadada tayada alaabada heerka caafimaadka carruurta.
3. Fiiri tiknoolajiyada wax soo saarka. Tiknoolajiyada wax soo saarka wanaagsan ayaa xaqiijin karta tayada. Tusaale ahaan, sagxadda adag ee alwaaxda, sagxadda adag ee alwaax adag iyo sagxadda dhulka la xoojiyay ee dhulka dabiiciga ah dhammaantood waxay qaataan teknolojiyadda "waxsoosaarka caqliga leh ee aldehyde" Qalabka ceyriinku waa eber aldehyde, nidaamka oo dhan ee wax soo saarka iyo waxsoosaarkuna waa eber aldehyde wasakheynta deegaanka, taas oo ah mid aad u ilaalin deegaanka ah.
4. Fiiri qaabka dhulka. Marka loo eego qaabka naqshadeynta qurxinta, tusaale ahaan, Nordic style wuxuu isticmaali karaa dabaqa midabka log.
5. Eeg qeexitaanka dabaqa. Marka loo eego habka koollada si loo doorto qeexitaanka dabaqa, sida herringbone collage small 780 × boqol iyo labaatan × 11mm
Hore: SPC Dabaqa SM-055
Xiga: SPC Dabaqa SM-057
SPC Dabaqa SM-057